Maamulka Soomaaliland Oo Yeeshay madaxweynihii Saddexaad.
Shakhsiyaadka arimahani hogaamiyaha ayaa waxaa kamid ah wiil uu sodog u yahay madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo kaas oo isna ka biya diidan maamulka Muuse Biixi, waxaana xoggaha ay ka helayso Puntlandnews.net gudaha magaalada Hargeysa ay tibaxayaan in maamulkan cusub loo bixin doono magac ka duwan kii hore ee ahaa UNITED SOMALILAND FRONT walina la iskuma af garan magaciisa.
Masuuliyiinta wada dhismaha maamulkan cusub ayaa warbaahinta u sheegay in Muuse Biixi uu ku fashilmay talada Somaliland ee rajada laga qabay, waxaana ay xuseen in laba maamulka ay ka jiraan gudaha deegaanada Somaliland taas oo ay qaarkood tusaale ugu soo qaateen in xukumaddii hore ee tagtay ay wali lugaha kula jirto maamulida Somaliland oo ay ka taliso.
Madaxweynaha cusub ee maamulkan ayaa waxaa uu soo bandhigi doonaa baahida ay bulshada reer Somaliland u qabaan dowladd cusub oo ay yeelato Somaliland, waxaana taasi ay daaqada ka saaraysaa maamulka Mr. Biixi.
Caasimada uu yeelan doono maamulkani cusub ayaan weli la meel marin, waxaase wararka qaarkood ay sheegayaan in laga dhigi doono magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag halka wararka qaarna ay sheegayaan in ay noqon doonto magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ahna caasimada labaad ee Somaliland.
Tan iyo intii madaxweyne Muuse Biixi loo doortay Somaliland waxa soo badanayey kala qaybsanaanta bulshada Somaliland, iyada oo kala badh dadkii u codeeyey Muuse Biixi ay iminka kuwada kacsan yihiin oo ay Beelaha qaarkood dhisteenba maamul cusub.